Mas’uuliyiinta Soomaalida ee xayiraada lagu soo rogay oo la kordhiyey – XAMAR POST
War qoraal ah oo kasoo baxay Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Antony Blinken oo looga hadlay dib u dhaca doorashada iyo shaqsiyaad lagu soo rogay xayiraadaha dal-ku-galka ama Visa-ha ayaa sheegay in la kordhiyay liiska shaqsiyaadka Soomaalida ee lagu soo rogay xayiraadaha dal-ku-galka (Visa), sababo la xiriria dib u dhaca mar kale ku yimid in lasoo geba-gebeeyo doorashada golaha shacabka.
Sidoo kale, Xoghayaha ayaa tilmaamay in ay qaadayaan talaabo kasta oo la xiriirta sharciga socdaalka iyo jinsiyadda, si buu yiri loo xadido bixinta Visa-ha ee kuwa la rumeysan yahay inay mas’uul ka yihiin carqaladeynta hannaanka dimoqraadiyadda Soomaaliya.
Isagoo sii hadlayay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken waxaa uu sheegay in ay jiraan warbixino lisku haleen karo oo ay hayaan, kuwaas ku saabsan khaladaad dhanka hanaanka ah islamarkaana lagu sameeyay xubno iskugu jira Suxufiyiin ama xisbiyada mucaaradka, kuwaas oo lala beegsaday cagajugleyn, cabsi gelin iyo xarig intaba waa sida uu hadalka u dhigee.
Sidoo kale, Blinken ayaa yiri ““Dowladda Mareykanka waxay si xooggan u taageereysaa shacabka Soomaaliyeed, waxaana ka go’an inay ka shaqeyso sare u qaadidda dimoqraadiyadda iyo barwaaqada laba dhinac,”.
Caasimada Ukraine oo bandaw laga dhigay ayadoo duqeyn ay ku socoto